Anesthesia & Airway Management Factory | Anesthesia & Airway Management Manufacturers, Suppliers
China Medical Supply Supplier Imu No Clip Designs N'ime-Chin Ma N'okpuru-Chin Type Nebulizer Nkpuchi
Disposable nebulizer kit bụ mejupụtara nebulization isi, na nkà mmụta ọgwụ iko, oxygen tube, ọnụ ma ọ bụ nkpuchi na-agbanwe eriri. E jiri ya tụnyere ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọdịnala megide ụkwara ume ọkụ na ọrịa ndị ọzọ na-eku ume, Disposable nebulizer kit atomize mmiri ọgwụ n'ime obere ahụ, ọgwụ ahụ na-abanye n'ime akụkụ okuku ume site na iku ume na ịdebe na ngụgụ, iji mee ka ikuku dị elu ma tụgharịa ụsọ mmiri, wee mezuo enweghi mgbu , ọgwụgwọ ngwangwa ma dị irè, enwere ike iji ya n'ọtụtụ ọrịa iku ume.
Medical Consumables Laryngeal Mask Airways N'ihi Single Jiri
Laryngeal Mask Airways maka otu eji eme ya sitere na ngwongwo ahụike, nwere ezigbo biocompatibility. Ngwaahịa nwere ụdị 5: Nkịtị PVC Laryngeal Mask Airways-ONE WAY, Normal Silicone laryngeal mask-ONE WAY, PVCzọ PVC Laryngeal Mask Airways-TWOBỌD, abụọ, Na-eme ka mkpuchi larịị silikon na-eme ka ọ dị elu-AKW TWOKWỌ abụọ, Na-emezi Silicone laryngeal mask-ONE WAY).
EC ISO Kwadoo 2021 Hot Na-ere Ahịa Disposable Silicone Anesthesia Mask
Anesthesia face mask bụ nkpuchi dabara adaba nke ọma na-anọdụ ala ihu gị nke ọma, mechie nke ọma na nrụgide zuru oke, na-arụ ọrụ n'ọnọdụ ụra nkịtị, ọ dị mfe iji dochie onye ụra na-ehi ụra, ọ dịkwa mfe ihicha.
Njirimara otu Roll Fit akpaaka ngbanwe dị ka Eson maka nkasi obi, enweghị mgbapụta.
Otu akụkụ zuru oke dabara nha nha atọ niile.
Advanced ikuku diffuser na-eme maka mebere nkịtị ọrụ.
N'ogbe Expandable Corrugated Nkụnwụ Ahụ Medical Disposable Silicone Breathing Circuit
Mkpụrụ ume iku ume nke igwe na-akụnwụ ahụ na ikuku na-ejikọta ya, nkwonkwo ụzọ atọ na bellows. A na-eme nkwonkwo nke polyethylene resin dị elu dị ka GB11115, na bellows na-eji ọgwụ ịgwọ PVC dị nro dịka GB10010. E kewara ya na ụdị nkọwa atọ dị iche iche. Usoro ntụgharị nke iku ume iku ume: 30L / min, mgbali nrụgide karịa 0.2KPa, ikuku iku ume kwesịrị ịbụ aseptic.